Golaha Ammaanka oo maanta fadhi ka leh Arrimaha Doorashooyinka,
Maanta oo ah 22-ka Febaraayo 2021 waxaa gelinka dambe kulmaya Golaha Ammaanka si dood adag ugu yeesho Xaaladda Soomaalida sida ammaanka, Doorashooyinka, Siyaasadda & waqti kordhinta ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ku howlgala.
Fadhigaas waxaa lagu go’aamiyay in fursad la siiyo Hogaamiyayaasha Dowladda Federaalka ee Muddo xileedkoodu dhammaaday, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir si loo dhammeystiro kulamada qabyada ah ee looga xal gaarayo Khilaafka hortaagan dhaqangalka heshiiskii 17-kii September 2020.
Dedaallo la isugu keeni lahaa Hogaamiyayaasha Federaalka, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir ayaa guuldareystay kadib markii isku tuur-tuur uu galay gogosha uu soo jeediyay Hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iclaamiyay in Garoowe lagu qabto, balse markii ay kordhay dalabta la xiriira in Muqdisho lagu qabto uu 17-kii Febaarayo 2021 shaaciyay in Caasimadda Dalka la isugu yimaado.
Waxaa Muqdisho ka maqan Hogaamiyayaasha D/Goboleedyada Puntland & Jubbaland oo ka qaybgeli lahaa Shirka lagu saxiixayo heshiiska Baydhabo ka dhacay, waxaana xaalka uu u muuqdaa Jug-jug oo bartaada joog, waa haddii uu dhaqangeli waayo heshiiskaas.
Sidoo kale waxaa muddadaas dhacay isku dhaca Ciidamada Dowladda Federaalka & ilaalada Midowga Musharixiinta, iska hor imaad ayaa saq dhexe ka dhacay Meel Hoteel u dhaw Madaxtooyada oo ay degeen labo Hogaamiye & Guddoomiye Baarlamaan hore.
Golaha Ammaanka ee QM muxuu ka yiri Xaaladda Soomaaliya?
Seddex ciyaaryahan oo Arsenal ah ayaa loo yaqaan
Sagaal kulan oo lagu go’aaminayo horyaalka Spain